トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Na mba hamaritana izay nindrana ny vola izay tokony fepetra amin'ny fanadinana
Rehefa fampiharana ny caching, mpanjifa dia mikasika ny fandinihana dia mampiahiahy.
dia noho ny tsy mizara ny fandinihana na dia eo aza ny zava-misy, raha ory tsy ampy ny vola, vola tsy azo hatsangana.
Noho izany, aoka isika ho fantatra mialoha momba ny na dia kely raha ny fandinihana dia azo inoana fa toy ny, na ny mari-pahaizana ambony dia fetra vola tapa-kevitra ny fanadinana.
Na dia eo aza mampisambotra
, ary tsy izaho handoa vola Kendreo indray, dia ho valin 'ny fatiantoka moneylenders.
Noho izany, ho ambany dia izay tsy marin-toerana ny vola miditra, dia mety ho raisin'ny avo-mety ho mpiara-miasa izay nanan-talenta amin'ny zavakanto.
Noho izany, azafady foana satria mifanety indrindra fa ianao dia manana ny fepetra toy ireto manaraka ireto ao amin'ny moneylenders. Ambony sy ambany ny fidiram-bola
: ny lehibe kokoa ny ambony ny fetra,
vola miditra am-boalohany ho avo kokoa arakaraka ny fetra ambany tena ambany, na raha toa miovaova: Raha toa ianao ka tsy miovaova, ny ambany ny fetra na hand? ny famerenana, tranon'omby sy ny tranga izay tena tokony averina eo ambanin'ny
ny hevitra mba hampitombo ny fetra dia tsy voafetra ho fidiram-bola, tsy fantatro inona no hevitra ny vola miditra satria azonao atao koa ny iray.
Izany dia, mazava ho azy, fa ny avy amin'ny isam-bolana karama rafitra, toy ny manontolo andro sy vonjimaika mpiasa, dia tapa-kevitra fa misy fidiram-bola na dia ny olona izay miasa ao amin'ny isan'ora, toy ny tapa-potoana sy ny tapa-potoana.
Na izany aza, nahazo diplaoma vaovao Dattari mpiasan'ny orinasa, dia mirona mandinika dia ho mafy, ary koa, na dia nankany amin 'ny anjara, toy ny toeram-piasana amin'ny alalan'ny fanovana imbetsaka.
Fa ny antony izany, dia mihoatra ny hany proprietorship sarotra ihany koa ny fanadinana. Fa
habetsaky ny vola miditra, dia ho nandinika amin'ny alalan'ny fandefasana toy ny tsy fandoavana karama manokana na taratasy kely.
Ao amin'ny ampahany ny mpanjifa ara-bola, raha tsy misy diso ao amin'ny toeram-piasana izay nambara, dia tsy misy latsaka ny raharaha mba hiroso amin'ny fandinihana na dia mindrana nefa tsy voatery hanaiky antontan-taratasy mba hanaporofoana fidiram-bola.
reference / fidiram-bola foana proof'll mahafantatra eo anatrehanao hisambotra ny vola
reference / < ny href = "http: //xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/11th_hours.html "> caching
ireo izay mila ny fotoana nindram-bola sy ny
ny fitondran-tena ambonin'ny
ao amin'ny isan-karazany ny vola
lenders dia efa fantatra avy tamin'ny fiainana andavanandro, na na tsy misy olana na dia mampisambo-bola, ihany koa ny iray amin'ireo fepetra ny fanadinana .
ohatra teny, iray ary izany dia ny toerana an-trano, izay mamerina ny asa fanovana no natao tamin'ny tombon-dahiny eo amin'ny fanadinana misy mety hisaotra .
koa, ankoatra ireo, ny raharaha izay efa loza ny tantara, toy ny hamaly ny nitsatoka amin'ny iray sy ny bola vaovao sampan-draharaha izay manana ny traikefa ny nindrana tamin'ny lasa, tahaka ny lehilahy Flit mety mety ho holavin'ny amin'ny fanadinana .
izany aza, raha dia mindrana amin'ny maro fampiharana ara-bola ao anatin'ny andrim fohy ny fotoana, dia ho vetivety dia voalaza mindrana .
izany, loza Tsy toy ny tantara, dia antsasaky ny taona Voarakitra ao amin'ny tokony ho herintaona avy dia tsy misy intsony, fa ny vola ary koa hanatanteraka ny famerenana fampiharana eo afovoany, dia mety lasa intsony izay fe-potoana mitranga .
?ry, dia miezaha hametraka ny fotoana indray mandeha monja aho Raha vao nanaiky ny famerenana. na na tsy misy toy izany ny tantara
loza, mba hahafahanao hijery avy amin'ny sampan-draharaha isaky ny fotoana ny fifandraisana na ny pejy fandraisana aoka fantatrao ny mifanaraka .
hatreto mindrana toe-javatra ny
Na dia tsy misy olana ao
fidiram-bola sy ny fitondran-tena ambonin'ny ambonin'ny, izany amin'ny niakatra ho any ny findramam-bola, misy ny famerenana lasa tranga mafy.
Ny lal?na amin'izao fotoana izao, satria lasa fitsipika izay tsy hisambotra ihany no ho amin'ny iray ampahatelon'ny vola miditra isan-taona ho toy ny tontalin'ny lal?na. Na dia ny fanontaniana am-bava in
misy fotoana dia matetika nanontany hoe: tandremo tsara satria matetika no tsy nolazaina taminao vokatry ny fizahana.
Na izany aza, ao amin'ny tranga tsirairay ireo tompona fandraharahana mba hisambotra vola toy ny raharaham-barotra, dia ho ivelan'ny sehatra ny tontalin'ny lal?na.
ny fanampin ', fa ny avy amin'ny fikambanana sy, satria izany mpiantoka izay nindrana manokana amin'ny tsy ho voasarona, raha toa, amin'ny raharahan-nindrana efa nilaza ny tontalin'ny ny lal?na, toe-piainana amin'ny fanomezana tena toetrany sy ny mpiantoka ianao dia ho afaka hanadio.
mpanjifa anisan'izany ny fitantanam-bola, ny fandinihana ny nindram-bola avy amin'ny fikambanana ara-bola, vaovao ny "olona manao ny fangatahana", toy ny vola miditra sy ny fitondran-tena dia tsy maintsy hatao. Na dia nampindrana vola
, raha toa ka tapa-kevitra fa ny toe-javatra, izay azo vokany tsy ho derailed teo afovoany, fanadinana ihany koa handeha hamaky tsy misy olana.
ny ankilany izay, te-hisambotra ny vola amin 'ny toetra izay ny zava-misy ankehitriny sy ny teo aloha tsy hita maso, na indray mandeha dia tapa-kevitra fa tsy ho manjavozavo hamaly drafitra, no koa matetika ny voalaza dia ny ho tonga ny raharaha eo amin'ny dingan'ny ny antontan-taratasy famerenana.
Fa mindrana toe-javatra, na dia nitondra ny fampiharana ara-bola eo amin'ny andrim-panjakana hafa, dia ny voninahitra no fanazavana fahafahana misafidy ny fizarana ny vaovao.
raha, koa ny safidy mba miezaka ny hanamarina izany mety ho voalaza karazana-baovao ianao, raha latsaka ao anatin'ny fanadinana. Ary
ny lalana marina, raha manao drafitra milamina ny hamaly, dia tokony ho ny hisambotra ny vola araka izay tiany. Anisan'izany
mpanjifa bola, ny fandinihana ny nindram-bola avy amin'ny fikambanana ara-bola, vaovao ny "olona manao ny fangatahana", toy ny vola miditra sy ny fitondran-tena dia tsy maintsy hatao. Na dia nampindrana vola
ny lalana marina, raha manao drafitra milamina ny hamaly, dia tokony ho ny hisambotra ny vola araka izay tiany.